Amaqela e-PayPal kunye ne-Samsung Pay njengenkqubo yokuhlawula | Iindaba zeGajethi
Amaqela e-PayPal kunye ne-Samsung Pay njengenkqubo yokuhlawula
Abafana kwi-PayPal, inkampani esekwe ngu-Elon Musk, u-CEO we-Tesla, uhambisa i-tab kwiinyanga nje ezidlulileyo ukuzama ukufikelela kwinani elikhulu labathengi abanokuhlala kwaye angabi sisithunzi se-eBay, inkampani athe wazihlukanisa nayo eyadlulayo iminyaka. Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, iApple yongeze i-PayPal njengenkxaso yentlawulo kwiqonga labafana abavela kwinkampani esekwe eCupertino. Kodwa kubonakala ngathi ayisiyiyo kuphela i-PayPal ebethetha ngayo kwiinyanga ezidlulileyo, ukusukela oko inkqubo yentlawulo ye-elektroniki yakwaSamsung, Isamsung Pay iya kuhambelana nePayPal. Kodwa okwangoku lo mbutho uya kufumaneka eMelika kuphela.
Kuya kuxhaphaka ukubona ukuba abasebenzisi bayisebenzisa njani i-smartphone ukuhlawulela izinto abazithengileyo ngaphandle kokusebenzisa ikhadi lebhanki letyala okanye imali, esivumela ukuba sishiye kuphela izitshixo kunye ne-smartphone siyokuthenga. Kodwa Inkonzo nganye isebenza ngebhanki eyahlukileyo eyenza ukuba olu hlobo lwenkonzo lube nzima, lube nzima. kwaye ayiloncedo kubantu abaninzi. Enkosi kulo mbutho, nawuphina umsebenzisi we-PayPal onesiphelo se-Samsung uya kuba nakho ukusebenzisa i-Samsung Pay ngaphandle kwebhanki abayisebenzisayo, into engenziwa yi-Apple Pay okwangoku kwaye engakhange ivume.
Njengoko besenditshilo apha ngasentla, ngalo mzuzu izakufumaneka eMelika kuphela, kodwa inkampani iyatyikitya ukuba ngokuhamba kwexesha le nkonzo izokwanda kwaye ifikelele kumazwe amaninzi. ISpain yayililizwe lokuqala laseYurophu ukufumana i-Samsung Pay, ke Akunakuba sengqiqweni ukucinga ukuba ilizwe elilandelayo apho olu khetho lunokufumaneka yiSpain. Ngokuqinisekileyo i-Samsung Pay ayizukuphela kwenkonzo yokuhlawula nge-elektroniki yokusebenzisa i-PayPal ukwandisa inkonzo yayo kwaye kunokwenzeka ukuba kungekudala i-Android Pay iyakwazisa ngesivumelwano solu hlobo ukuqhubela phambili ukuphucula inkonzo yayo, ngakumbi e-United States.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » Amaqela e-PayPal kunye ne-Samsung Pay njengenkqubo yokuhlawula
I-Galaxy Note 8 inokuboniswa ngo-Agasti 23 kwaye ifike kwintengiso ekuqaleni kukaSeptemba